DAINIK SANJAL VIDEO: ​कतारमा आजदेखि नयाँ नियम, कफाला प्रणाली संसोधन
भिडियो डाउनलोड गर्न तल क्लिक गर्नुहोस
​कतारमा आजदेखि नयाँ नियम, कफाला प्रणाली संसोधन
काठमाडौं, मंसिर २८– कतारमा आजदेखि आप्रवासि कामदारका लागि नयाँ नियम कार्यान्वयनमा आएको छ । कतार सरकारले कफाला प्रणाली संसोधन गर्दै मंगलबारदेखि नयाँ नियम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नयाँ नियममा कामदारलाई थप अधिकार प्रदान गर्दै सहज व्यवस्था गरिएको छ ।
कफाला प्रणाली आधुनिक दास बनाउने प्रणाली भएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि विश्वकपको आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको कतारले कामदारलाई सहज बनाउने नियम लागु गरेको हो । नयाँ स्पोन्सरसिप प्रणालीले रोजगारदाता, कर्मचारी वा प्रवासी कर्मचारीका सम्बन्धलाई नियमन गर्नेछ ।
गएको वर्ष कतारको मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ कानुनको मस्यौदा स्वीकृत गरी अन्तिम स्वीकृतिका लागि अमिरलाई पठाएको थियो । त्यसबेलै कतारको माथिल्लो निकाय अर्थात अमिरले यो नियम स्वीकृत गरेपनि डिसेम्बर १३ देखि लागु गर्ने जनाइएको थियो ।
कफाला प्रणालीमा रोजगारदाता वा मालिकले अनुमति नदिएसम्म लाश समेत स्वदेश फर्काउन सकिंदैन भने, कामदारले कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउँदैन् । पासपोर्ट मालिकको हातमा हुन्छ, कामदारको काम, बसाई र आवतजावत रोजगारदाताले नियन्त्रण गर्छ ।
कफाला प्रणालीमा कामदारलाई दासको व्यवहार गरिन्छ । तर अव कामदारले चाहेको खण्डमा कम्पनी परिवर्तन गर्न पाउने छन् । नियम अनुसार विदा र स्वदेश फिर्तिका लागि पनि कम्पनीले विदा नदिए छुट्टै समिति बनाइएको छ र त्यहाँबाट विदा लिएर घर फर्किन सक्ने छन् । समितिले तीन दिन भित्रमा निर्णय गर्ने छ ।
सेवा अवधि रोजगारदाता कहाँ काम गर्न थालेको दिनबाट गन्ति हुनेछ । कामदारले अव रोजगारदाता परिवर्तन गर्न चाहेमा साविकको रोजगार दातालाई जानकारी गराए मात्रै पुग्ने छ । अनुमोदन गराइरहन पर्दैन । तर निश्चित अवधिका लागि सम्झौता गरेका कामदारले भने पहिल्यै जानकारी गराउनु पर्ने छ ।
काम परिवर्तन गर्न चाहने आप्रवासीले नयाँ ठाउँमा काम थाल्नु अघि प्रशासनिक विकास, श्रम तथा सामाजिक मामिला मन्त्रालयबाट अनुमति लिनु पर्नेछ । यस्तै करार अवधि हुँदै रोजगारदाता परिवर्तन गर्नु परेमा भने साविकको रोजगारदाताबाट अनुमति लिनु पर्नेछ ।
रोजगारदाताले अनुचित व्यवहार गरेको, शोषण गरेको प्रमाण देखाउन सके रोजगारदाता परिवर्तनको हक हुनेछ । नयाँ नियम अनुसार कतारमा काम गर्ने भिसा प्राप्तीका लागि करार अनिवार्य हुने र त्यस्तो करारपत्र आफ्नै देशमा हुँदै हेर्न सकिनेछ । नयाँ नियम घरेलु कामदारका लागि समेत लाभदायी छ । कामदारको पासपोर्ट अनावश्यक राख्ने रोजगारदातालाई २५ हजार रियालसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।
कतारमा २१ लाख बढि आप्रवासि मध्य झण्डै साढे चार लाख नेपाली कार्यरत छन् । कफाला प्रणाली खाडीका अन्य देशहरु बहराइन, कुवेत, साउदी अरब, युएई र ओमानमा यथावत छ ।
Posted by Dainiksanjalvideo at 9:55 PM
कतार बाट आयो ४ लाख नेपालीसहित २० लाख आप्रवासी लाई खुशी को खबर सबै कतार मा बस्नु हुने नेपाली दाजु भाइ ले यो न्युज पढ्नु होला र शेर गर्नुहोला
‘एक्जिट परमिट’बारे कतारमा उच्चस्तरीय समिति ४ लाख नेपालीसहित २० लाख आप्रवासी लाभान्वित हुने स्पोन्सरसीप सम्बन्धी नयाँ कानुन मंगलबारब...
'लाश त ल्याइदेउ'
चन्दनकुमार यादब, राजबिराज, माघ १९- श्रीमान साउदी उडेपछि पराले छानो फेरेर पक्की घर बनाउने र त्यसपछि सुखका दिन आउने आश थियो सप्तरीको ब...
१९ वर्षका विनोद कतारको जेलमा, उद्दार गरिदिन सरकारलाई परिवारको आग्रह यो न्युज देख्ने सबले पढ्एर शेर गर्नु होला ठुलो सहयोग हुनेछ
जुनादेवी खत्री । कास्की, चैत २० – कास्कीको थुमाकोडाँडाकी सरस्वती रानाभाटका जेठा छोरा भर्खर १८ टेक्दै हुनुहुन्थ्यो । गत वर्ष १२ कक्षाको परीक...
दुवै मृगौला खराब भएकी पवित्रालाई उपचारका लागि आर्थिक अभाव, सके सहयोग गर्नुस नसके सेयर गर्नुहोला
काभ्रेको उग्रचण्डी नालाकी ३० वर्षीया पवित्रा दाहाल दुवै मृगौला खराब भएपछि समस्यामा परेकी छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकले दसैंलग...
कामदारको पासपोर्ट अनावश्यक राख्ने कम्पनिलाई २५ हजार रियालसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ,
कतारमा आजदेखि आप्रवासि कामदारका लागि नयाँ नियम कार्यान्वयनमा आएको छ । कतार सरकारले कफाला प्रणाली संसोधन गर्दै मंगलबारदेखि नयाँ नियम क...
आज कतारमा भएको बर्षा को कारणले हेर्नुस रोड भरी नदी जसरि पानी बगी रहेको छ सबैलाई हामी अनुरोध गर्दछौ यो भिडियो हेरी शेर गर्नु होला र आफु सुरछित ठाउँ मा बस्नु होला
आज कतारमा भएको बर्षा को कारणले हेर्नुस रोड भरी नदी जसरि पानी बगी रहेको छ सबैलाई हामी अनुरोध गर्दछौ यो भिडियो हेरी शेर गर्नु होला र आफु सुरछि...
गोहीले चपाएपनि बाँचे अर्जुन ! परिवार को अवस्था एक दम कमजोर छ उपचार गर्न पैसा छैन तेसैले यो पोस्ट सक्दो शेर गरी दिनु होला सक्ने ले सहयोग नसक्ने ले किर्पया शेर गर्न न भुल्नु होला
चितवन, वैशाख ६ – ठूल्ठूला जेब्रा, अर्नालगायत वन्यजन्तु गोहीले सजिलै मारेका घटना हामीले अन्तर्राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट देख्छौँ । गोहीले समाइसके...
कतारमा २२ जना नेपाली अलपत्र
माघ २३, २०७३- चार महिनाको तलब नदिई कम्पनी सञ्चालक र म्यानेजर सम्पर्कबिहीन भएपछि कतारमा २२ जना नेपाली कामदार अलपत्र परेका छन् । पीडितह...
मनबहादुर राईले आफ्नो जीवन बचाईदिन याचना
बिन्द्र बराल रंगेली , माेरङ मिक्लाजुङ १ साम्पाङ टोलका मनबहादुर राईले आफ्नो जीवन बचाइदिन याचना गरेका छन् । तीन वर्षदेखि आन्द्राको अल्सरबाट पी...
कतारमा कहाँ हराए उनी ?
सुनिल न्यौपाने/प्रभातकुमार मिश्र, जनकपुर मध्यतराईको धनुषा जिल्लाको सदरमुकाम जनकपुरमा नै छ मोहम्मद ताहिर राइनको घर । जनकपुर २० को भट्टीटोल...